က Tiger Woods အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့် Golf Stats ကတော့
က Tiger Woods: ဂေါက်ကွင်းရဲ့ Giants တစ်ခုမှာတစ်အတ္ထုပ္ပတ္တိ
က Tiger Woods ပွဲတစ်ပွဲအကြီးမြတ်ဆုံးအစဉ်အဆက်ဂေါက်သီးနှင့် inarguably အကြီးမြတ်ဆုံးထိပ်လက်တစ်ဆုပ်စာတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ "ကျား Effect" လူအစုအဝေးဝမ်းသာပီတိသူလိုလားသူလှည့်လာသောအခါ 1996 ခုနှစ်အတွက်စတင် PGA Tour ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ကြီးပြင်းတီဗီ ratings တိုးတက်လာခဲ့သည်။
မွေး date: ဒီဇင်ဘာ 30, 1975
မွေးရာဌာန: ထင်းရူးပင်, ကယ်လီဖိုးနီးယား
အမည်ပြောင်: ကျား, သင်တန်း၏။ မိမိအပေးထားသောနာမည်ဖြစ်ပါတယ် Eldrick ။ (သူမ နောက်ထပ်အမည်ဝှက် သို့သော်။ )
( ဝုဒ်အားဖြင့်အနိုင်ရခဲ့ပြိုင်ပွဲများ၏စာရင်းအပြည့်အစုံကြည့်ရန် )
မာစတာ: 1997, 2001, 2002, 2005
( ဗိုလ်ကြီးအတွက်ကျားရဲ့စံချိန်အကြောင်းပိုမို Read )
အမေရိကန်အပျော်တမ်း: 1994, 1995, 1996
က Tiger Woods များအတွက်ဆုပေးပွဲနှင့်ဂုဏ်ထူး
PGA Tour ပိုက်ဆံခေါင်းဆောင်, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 2013
PGA Vardon ဒိုင်းဆုဆုရှင် (အနိမ့်အမှတ်ပေးပျှမ်းမျှ), 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2013
တစ်နှစ်တာ၏ PGA Tour Player ကို, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2013
အမေရိကန်သမ္မတဖလားအဖွဲ့သည်အဖွဲ့ဝင်, 1998, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013
အမေရိကန်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားအဖွဲ့သည်အဖွဲ့ဝင်, 1997, 1999, 2002, 2004, 2006, 2010, 2012
"ဘာပဲသင် (ဂေါက်သီးမှာ) ရဘယ်လောက်ကောင်း, သင်အမြဲပိုကောင်းရနိုင်သည်။ ထိုအသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ "
"ငါ့ကိုမှဂေါက်သီးရိုက်ရုံလုပ်ဖို့တစ်ခုခုမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မဒီဂိမ်းကိုချစ်။ ဒါဟာကျွန်မတိုရန်ရှိသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်တူပါပဲ။ "
"ငါသည် 11. စဉ်အခါ, နှစ်ခုအောက်ဆုံးတစ်ရက်နှင့် cutest ရည်းစားရှိခဲ့ပါတယ်, အဲဒီနှစ် 32 ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရအမျှငါ့အသက်ကို၏အကောင်းဆုံးတစ်နှစ်ငါဖြောင့်။ အရာအားလုံးပြီးကတည်းကဆင်းခဲ့တယ်ခဲ့ပါတယ်။ "
က Tiger Woods အသေးအဖွဲ
က Tiger Woods အငယ်ဆုံးစဉ်ဖြစ်လာခဲ့သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခမ်းနား Slam သူသည်ဗြိတိသျှပွင့်လင်းအနိုင်ရသောအခါ, အသက်အရွယ် 25 မှာ 2000 ခုနှစ်ဆုရှင်ပါ။
1997 ခုနှစ်တွင်က Tiger Woods အသက်အရွယ် 21 နှစ်, သုံးလနှင့် 14 ရက်မှာအငယ်ဆုံး-အစဉ်အဆက်မာစတာချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဝုဒ်အစဉ်အဆက်ကိုအမေရိကန်အပျော်တမ်းအနိုင်ရအမေရိကန်အငယ်တန်းအပျော်တမ်းနှင့်အငယ်ဆုံး (18) အနိုင်ရ (15) အငယ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
ဝုဒ်လက်ရှိတွင်ပေါ်ဒုတိယရပ်တည် စာရင်းအနိုင်ရရှိ PGA Tour အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း 79 နှင့်၎င်း, အပေါ်ဒုတိယ အဓိကအနိုင်ပေးစာရင်း 14 နှင့်အတူ။
ဝုဒ် 12 ကွဲပြားခြားနားသောနှစ်များတွင်အနိုင်ပေးအတွက် PGA Tour ဦးဆောင်တော်မူပြီ အဘယ်သူမျှမကအခြားဂေါက်သီးထက်ပိုမိုခြောက်နှစ်ကပြုတော်မူပြီ။
ဝုဒ်သည်လည်း, ငါးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအောင်ပွဲနှင့်အတူလှည့်လည်စံချိန် 10 PGA Tour ရာသီရှိပါတယ်။
က Tiger Woods ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အဘယ်သူ၏အံ့သြဖွယ်လူငယ်နှင့်အပျော်တမ်းကြီးစွာသောအညီအမျှအံ့သြဖွယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြီးစွာသောအားဖြင့်ဖွင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်တစ်ဦးဂေါက်သီး: အဆိုပါကမ္ဘာကြီးရှေ့မှာမဂေါက်ရိုက်ကို PhenomII က Tiger Woods ၏အကြိုက်ကိုတှေ့မွငျဘယ်တော့မှခဲ့သည်။
ဝုဒ်ကိုအတုယူခဲ့သညျ သူ၏အဘ နေဆဲကသူ့စားခွက်ထဲမှာစဉ်6လအသက်အရွယ်မှာ '' s ကိုဂေါက်သီးလွှဲ။ အသက်အရွယ်2မှာသူ ပုသူ Mike ဒေါက်ဂလပ်ပြရန်ပျေါမှာထငျရှား နဲ့ Bob Hope နှင့်အတူ putted ။ အသက်အရွယ်3မှာ, သူကိုးဦးတွင်းအဘို့ 48 သေနတ်နှင့်အသက်အရွယ်5မှာသူဂေါက် Digest မဂ္ဂဇင်းအတွက် featured ခဲ့သည်။
ထို့နောက်တကယ်အထင်ကြီးစရာပစ္စည်းပစ္စယစတင်ခဲ့သည်။ ဝုဒ်အသက် 8 မှာစတင်အဆိုပါအကောင်းမြင်အင်တာနေရှင်နယ်အငယ်တန်းပြိုင်ပွဲခြောက်ကြိမ်အနိုင်ရခဲ့သည်။
သူသုံးအမေရိကန်အငယ်တန်းဝါသနာရှင်များအနိုင်ရအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကပထမ။ သုံးဖြောင့်သူ၏ပထမဦးဆုံး အမေရိကန်အပျော်တမ်း ခေါင်းစဉ်ကစား 1994 ဝုဒ်သည် လာ. စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်တွင်ကောလိပ်နှစ်နှစ် ။
သူက 1996 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်နွေရာသီအတွက်လိုလားသူလှည့်နှင့်ပေါ်မှာခုနစ်ပြိုင်ပွဲကစား PGA Tour Q-ကျောင်းကတဆင့်သွားလိုရှိခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ပိုက်ဆံအတွက်ထိပ်တန်း 125 ထဲမှာအပြီးသတ်ဖို့လိုအပ်နေ။ ဝုဒ်နှစ်ကြိမ်အနိုင်ရငါးနှစ်ဆက်တိုက်ထိပ်ဆုံး5ချောတင်ခဲ့သည်။
1997 ခုနှစ်တွင်သူသည်အနိုင်ရ အဆိုပါမာစတာ သူ၏ပထမဦးဆုံးအဓိကပါ။ ဝုဒ် 1998 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်တစ်ချိန်ကအနိုင်ရပေမယ့် 1999 ခုနှစ်မှာသူဟာသည်အထိအဆုံးသတ်မပြုခဲ့သောတစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဆုများဆက်တိုက် Player ကိုတစ်ဦး string ကိုစတင် ဗီဂျေး Singh က 2004 ခုနှစ်တွင်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်အနိုင်ရခဲ့သည်။
သူဟာဝုဒ် '' 2000 ရာသီ PGA Tour အပေါ်အစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် 2000 ခုနှစ်, 1999 ခုနှစ်ထို့နောက်ကိုးကပိုကြိမ်ရှစ်ကြိမ်အနိုင်ရသူတစျနှစျသုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗိုလ်ကြီးအနိုင်ရဒုတိယဂေါက်သီးဖြစ်လာပြီးဖဲ့ Byron နယ်လ်ဆင်ရဲ့ ပိုပြီး-than- 50 နှစ်အရွယ်အမှတ်ပေးပျှမ်းမျှစံချိန်။
သူမဟာအနိုင်ရခဲ့သည့်အခါ 2001 ၌ဝုဒ်ဟာဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရဆီသို့ရောက် လာ. , ဘာတစ်ချိန်တည်းမှာအားလုံးလေးယောက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗိုလ်ကြီးကိုင်ဖို့ပထမဦးဆုံးဂေါက်သီးဖြစ်လာခဲ့သည် "ကျား Slam ။ "
တစ်ကြိမ်မှာဝုဒ်အားလုံးလေးယောက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗိုလ်ကြီးအတွက်တန်းတူ ဆက်စပ်. အတွက်အနိမ့်ရမှတ်များအတွက်စံချိန်ကျင်းပသို့မဟုတ် shared ။ သူကအနိုင်ရမယ့် အမေရိကန်ပွင့်လင်း 12 နဲ့က 15 လေဖြတ်ခြင်း, မာစတာတို့က ဗြိတိန်ကိုဖွင့် ရှစ်လေဖြတ်ခြင်းဖြင့်။
တစ်ဦးကလွှဲပြောင်းလဲမှုသည်သူ၏ 2004 ခုနှစ်တွင်နည်းနည်းအနိုင်ရနှေးကွေး, သူ၏ ဆက်တိုက်ဖြတ်တောက်မှု၏စံချိန် Streak 2005 ခုနှစ်တွင် 142 မှာအဆုံးသတ်ဒါပေမယ့်သူက 2005 ခုနှစ်နှစ်ဦးကိုဗိုလ်ကြီးနှင့်အတူနောက်ကျောကိုဟုန်းစေသော။
ဝုဒ်သည်မိမိအဘ၏အသေခံခြင်းတွင်အောက်ပါ 2006 ခုနှစ်ချွတ်စုံတွဲတစ်တွဲလအတွင်း ယူ. , အမေရိကန်ပွင့်လင်းမှာမိမိပြန်လာအတွက်ဖြတ်လွဲချော်။ သို့သော်ထို့နောက်သူကလာမယ့်နှစ်ဦးကိုဗိုလ်ကြီးအနိုင်ရသူကစားလာမည့်ရှစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်အနိုင်ပေးပယ်တလည်လည်။
2008 ခုနှစ်တွင်ဝုဒ်သူတစ်ဦးကိုက် ACL နှင့်အတူနဲ့သူ့ရဲ့ခြေထောက်တစ်ဦးကျိုးနှင့်အတူကစားခဲ့ထင်ရှားထို့နောက်အမေရိကန်ပွင့်လင်းအတွက်သိသာထင်ရှားသော PLAYOFF အောင်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူကမကြာမီပြီးနောက်ခွဲစိတ်မှုခံယူခြင်းနှင့်နောင်လာမည့်ရှစ်လလွဲချော်။ အဆိုပါ 2009 WGC Accenture ပွဲစဉ်ချန်ပီယံရှစ် Play ကသူ၏ပြန်လာမှတ်သား။
ဝုဒ်လိင်စွဲလမ်းများအတွက်အကြံပေးခြင်းလျှက်သူ့ကိုမှဦးဆောင်ဖြစ်ရပ်များတစ်ကွင်းဆက်စတင်ခဲ့ကြောင်း, မိမိဖလော်ရီဒါနေအိမ်အပြင်ဘက်တွင်တစ်ဦး 1-ကားတစ်စီးမတော်တဆမှု, မျိုးစုံပေါ်ထွန်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်သောအခါသော်လည်း, 2009 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကသောင်းကနင်းသို့လှဲချဘယ်မှာဝုဒ် '' ဂေါက်သီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ ညားနှင့် ကွာရှင်း ဇနီးထံမှ အတှကျလညျး Nordegren ။ (သူတို့ကွာရှင်းခြင်းမပြုမီ, ကျားနှင့်အတှကျလညျးတစ်ဦး, ကလေးနှစ်ယောက် သမီးဆမ်အမည်ရှိ နှင့် သားချာလီအမည်ရှိ ။ ) ကြောင်း၏ဒေါက်တွင်, ဝုဒ် 2010 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ်သူ့ရဲ့ပထမဆုံး winless ရာသီရှိခဲ့ပါတယ်။
ဝုဒ် 2011 ခုနှစ်ခရီးစဉ်ဖြစ်ရပ်များမှာထပ် winless သွားဘဲ, နှောင်းပိုင်းကယခုနှစ်အတွက်သူ့ကိုယ်ပိုင်ရှဗရွန်ကမ္ဘာ့ဖလားစိန်ခေါ်မှုအနိုင်ရပြုလေ၏။ သူကနောက်ဆုံးတော့ 2012 ခုနှစ်အာနိုး Palmer ကဖိတ်ခေါ်ချက်မှာ 5-shot အောင်ပွဲနဲ့အတူပြန် PGA Tour ဆုရှင်ရဲ့စက်ဝိုင်းတယ်။
2013 ခုနှစ်တွင်သူသည်အတူတူပင်ပြိုင်ပွဲများတွင်အများဆုံးအနိုင်ပေးအဘို့အဆမ် Snead ရဲ့စံချိန်ထားခြင်း, အဋ္ဌမအကြိမ်, ပြန်အာနိုး Palmer ကဖိတ်ကြားချက်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်နောက်ကျောခွဲစိတ်အပါအဝင်ဒဏ်ရာပြဿနာများ, ရက်စွဲအားမိမိအဆိုးဆုံးရာသီနှစ်ခုမှဦးဆောင်, 2014 နှင့် 2015 ခုနှစ်တွင်ဝုဒ်နှောငျ့။ (ကြည့်ရှုပါ: အဆိုပါအတော်များများဒဏ်ရာများနှင့်က Tiger Woods ၏ခွဲစိတ် ) ထို့နောက်သူသည်အစောပိုင်း 2017 ခုနှစ်တွင်အခြားကျောခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်းမပြုမီတစ်ခုလုံးကို 2016 PGA Tour ရာသီလွဲချော်။
နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် 2017 ခုနှစ်, ဝုဒ်ညဉ့်အလယ်၌ဖလော်ရီဒါအတွက်ရဲကကျော်ဆွဲထုတ်ခံခဲ့ရခြင်းနှင့် DUI စွဲချက်အပေါ်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ Breathalyzer စမ်းသပ်မှုအရက်၏လက္ခဏာမပြသ; ဝုဒ်သူဆေးညွှန်းဆေးဝါးများမှမကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုခဲ့ချင်ပါတယ်ဟုပြောသည်။ တစ်ဦးကစုံတွဲရက်သတ္တပတ်အကြာမှာတော့ဝုဒ်သတင်းများအရသည်မိမိအများအပြားဒဏ်ရာကနေဖုံးလွှမ်းနေတာကိုကိုက်အခဲပျောက်ဆေးအပေါ်တစ်ဦးမှီခိုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်တစ်ခုစွဲကုသမှုစက်ရုံသို့ကိုယ်တော်တိုင်စစ်တယ်။
သင်တန်း off, ဝုဒ်ဟာဂေါက်ကွင်းဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူကတစ်ဦးဂေါက်သီးသင်ကြားပို့ချစာအုပ်ငါ (အမေဇုံအပေါ်ဝယ်) ဂေါက်သီးရိုက် Play ကိုဘယ်လိုခေါ်တော်မူထုတ်ဝေခဲ့သည်။ နှင့် 1996 ခုနှစ်တွင်ဝုဒ်နှင့်သူ၏ဖခင်အားဖြင့်ဖွင့်လှစ်သည့်တိုက်ဂါးဝုဒ်ဖောင်ဒေးရှင်းက, ဂေါက်သီးအတွက်စတင်ရန်နွဲ့သောလူငယ်ကကူညီခြင်းနှင့်အသက်တာ၌အောင်မြင်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ သူလည်းတစ်ဦးဂေါက်ကွင်းဒီဇိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ပိုပြီးအဘို့ - ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို သူ့မိခင် ကသူ့ ကြီးတွေ ol '' ရွက်လှေ နှင့် ကုမ္ပဏီကြီးအိမ်သူအိမ်သား , အဘယ်ကြောင့်သူ အနီရောင်ရှပ်အင်္ကျီကျီ နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်, သူ၏ ပစ္စည်းကိရိယာများ နှင့် ထောက်ခံချက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့မြင် - အများကြီး, အများကြီးပို က Tiger Woods မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ ။
အန္န Rawson စွဲမက်ဖွယ်ရာ Shots
က Tiger Woods '' ခမညျးတျော: Earl ဝုဒ် Sr; ကဘယ်သူလဲ
အာနိုး Palmer က
ဂျူးဘာသာအတွက် လိုက်. ငိုကြွေးမြည်တမ်းရဲ့ Kaddish ကဘာလဲ?
အခြားရွေးချယ်စရာ Fantasy Football League အကြံပြုချက်များ
Pentecostal ခရစ်ယာန်တွေဟာ - သူတို့ကအဘယ်အရာကိုယုံသလား?
တက္ကသိုလ် Findlay ၏အဆင့်လက်ခံရေး
သင့်ရဲ့ Dashboard ကိုပေါ်ဘက်ထရီအလင်း: အလင်းများထိမခိုက်
Edgar Allan ဖိုးရဲ့ 'The Black Cat' ၌လူသတ်မှုများအတွက်စိတ်ရင်း
အာဖရိက-အမေရိကန်သမိုင်း Timeline ကို: 1990 - 1999
စပိန်မှ '' စိတ် '' ဘာသာပြန်ဆို
ရော်နယ်အောင်နိုင်ရေဂင်နှင့် 1983 ခုနှစ်ကဘေရွတ်ထဲမှာ 241 ကိုအမေရိကန်မရိန်းတပ်သားများ၏သတ်ဖြတ်မှုများ
Mousterian - တစ်ဦးအလယျပိုငျးကျောက်ခေတ်နည်းပညာ Outmoded ဖြစ်မည်အကြောင်း
ထိပ်တန်း 10 ဦးပေါ့ပ်သီချင်းများနွေရာသီ 2001
Hydrofluoric အက်ဆစ် - Breaking Bad
ရောဘတ် del Rosario
ခေတ်ရပ်ရန်: အမျိုးသမီးများတန်းတူရေးဆန့်ကျင်ဖီးလစ် Schlafly ရဲ့ကင်ပိန်း